रक्षा नेपालकी मेनुका थापाबाटै पीडितमाथि चरम यातना « Ramechhap News
रक्षा नेपालकी मेनुका थापाबाटै पीडितमाथि चरम यातना
सामाजिक संस्थाको रुपमा परिचित रक्षा नेपालको अनुसरणमा पुगेका बालबालिकामाथि चरम अत्याचार भएको पीडितहरुले आरोप लगाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पुजा बोहोरा ‘नाम परिवर्तन’ले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर रक्षा नेपालको अनुसरणमा आईपुगेका बालबालिकाहरुमाथि ज्यादती भैरहेको बारेमा अध्ययन गरि कारबाही गर्न माँग गरेकी छन् ।
उनले भनिन्,‘म रक्षा नेपाल र सञ्चालक मेनुका थापाको बिरुद्धमा सडकमा आएकी होईन, उहाँले मलाई पर्दाखेरी साथ सहयोग गर्नुभयो, तर जति मलाई सहयोग गर्नुभयो त्यो भन्दा बढि ममाथि उहाँले अत्याचार गर्नुभयो, शोषण गर्नुभयो, जन्मदिने बा–आमा र घर परिवार छोडेर मलाई उहाँले रक्षा दिन्छु भनेर ल्याउनु भयो, राख्नुभयो मैले राती १२ बजेसम्म जुठा भाँडा माझेर पढ्नु पथ्र्यो ।’
उनले भनिन्,‘म मानसिक रुपमा कमजोर बनेकी थिएँ, त्यो बेलामा समेत उचित किसिमको माया पाउन सकिएन, हुन त जन्म दिने आमाजस्तै त कहाँ हुँदा रहेछन् कर्मकी आमा ?, उहाँले मेरो फेशबुकमा आँफैले स्टाट कारेको हाल्नु हुन्थ्यो, एकदिन जन्मदिने आमा भन्दा कर्म दिने आमा महान हुन्छन् भनेर उहाँले नै लेख्नु भएको हो, मेरो फेशबुकबाट उहाँ केटाहरुसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मलाई उल्टै गाली गर्ने र पिट्ने गर्नुहुन्थ्यो, मैले कोरियाबाट जितेर ल्याएको मेडल समेत देख्न पाएको छैन्, उहाँले आफ्नो दराजमा राख्नुभएको छ ।’
आफूले जति दुःख पाएपनि केही गरेर देखाउँनु छ भनेर हिम्मत नहारेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्,‘आजको दिनमा पनि हिम्मत हारेकी छैन्, मजस्ता पीडितहरुको नाममा विदेशी डोनर्सहरुसँग पैसा माँग्ने, सामाग्रीहरु माँग्ने र आफन्तहरुलाई बाँड्ने गर्नुभएको छ, मैले विलासिताको लागि आधुनिक सामाग्रीहरु खोजेकी होईन, मेरो पढाईको लागि चाहिने सामानहरु थिए, बाहिर रक्षा नेपाल भित्र भच्छक नेपालको व्यबहार गरिन्छ, मेरो नाममा आएका अन्तरवार्ताहरु समाचारहरु सबै मेनुका थापाले नै लेख्नुभएको र भने गराए अुनसारका थिए, मेरो आफ्नो वास्तविकता मारेर उहाँको कुरालाई बोल्नुपथ्र्यो, त्यहाँ भित्रका पीडाहरु बाहिर भनेको खण्डमा मारिदिन्छु भन्ने खालका धम्की समेत दिनुहुन्थ्यो, मैले पैसा माँगे भने जहिले बाबाको नाममा सरापेर गालि गर्नुहुन्थ्यो म त्यतिबेला अति विक्षिप्त बन्थें ।’
सञ्चालक थापाले महिनावारी भएको अवस्थामा प्रयोग गरिएका लुगासमेत साना–साना भाई बहिनीलाई सफा गर्न लगाउने गरेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘मेरो माँग पीडितको नाममा खोलिएको रक्षा नेपालमाथि राज्यले उचित निगरानी राख्नुपर्छ, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, रक्षा नेपालमा रहेका बालबालिकाहरुको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ, र त्यहाँबाट मलाई जसरी निकालिएका बालबालिकाहरुको अवस्था के छ ? कस्तो छ, त्यसका बारेमा सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ, मैले त यस्ता दुःखहरु भोगें, अब म जस्ता पीडितहरुले यस्ता दुःखहरु भोग्न नपरोस् ।’
पुजा बोहराले वाचन गरेको अपिल ः
म आफ्नो इच्छाहरुलाई मारेर आफै सक्षम भएपछि किनेर लगाउँला भन्दै चित्त बुझाउँथे । आफ्नो पढाईलाई अगाडी बढाउने हेतुले बिजुलीबजारमा रहेको चक्रवर्ती ‘ल’ कलेजमा पढ्न गएँ । त्यहीँँ मैले पढ्ने निधो गरेपछि आवश्यक कापीकिताब किनिदिनुस् आमा भन्दा आमाले चासो देखाउनुभएन । मैले सबैसमक्ष अनुनयविनय गरेपछि रक्षा नेपालकै लोचना नेपाल म्यामले कापी किनिदिनु भयो । तर आमाकोसामु कति रुँदा–कराउँदा पनि नानाथरीका गफ लगाएर टानुहुन्थ्यो । पहिलो वर्ष लैनचौरबाट नै विजुलीबजार धाएँ । त्यहाँ जाँदा लाग्ने गाडि भाडा माग्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । मलाई माग्नै अप्ठ्यारो हुनेगरी तथानाम अपशब्दहरुले गालीगलौच गर्नुहुन्थ्यो । कहिलेकाँही मुना दिदीले दिनुहुन्थ्यो त, कहिलेकाँही तलबाट माथि र माथिबाट तल जा भनी अल्झाइरहन्थे । सहदै गएँ, आमासँग छैन् होला भन्ने भावनाले रुँदै भए पनि कलेज जाने गर्दथेँ । कलेजमा खाजा खानको लागि भनेर आजसम्म पनि पैसा दिनु भएन । कलेजमा भर्ना नगरी कलेज जानु पर्दा साथीभाईहरुले मलाई किन भर्ना नगरी पढेको ? प्रश्न गर्दा म लज्जित हुन्थेँ । त्यसपछि मलाई मानसिक तनाब हुन्थ्यो । कलेजमा पनि २ वटा नाम दिइएको थियो । सोही कारण मलाई साथीभाईहरुको विविध प्रश्नहरुले तनाब हुन्थ्यो । उनीहरुका प्रत्येक प्रश्नहरुको उत्तर मसँग हुँदैनथ्यो । अहिले म दोस्रो बर्षमा अध्ययनरत छु । २०७१ पौष १ गते कान्तिपुर दैनिकमा न्यूज आमाले आफैँ बढाईचढाई लेखाउनु भएको हो । अन्र्तवार्ता पनि आमाले भने बमोजिम नै दिनुपर्दथ्यो । आमाले भने बमोजिम नभनेपछि मलाई तथानाम गाली गर्नुहुन्थ्यो । रक्षा नेपालमा आश्रय लिएर बसिरहेका म जस्ता पीडित छोरीहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो कक्षामा पढ्ने म नै थिएँ । तर पनि कोही ठूलो मान्छे आएको बेला मलाई ११ कक्षामा पढ्छे भन्नुहुन्थ्यो । म जहिल्यै आमाको झुटप्रति चकित हुन्थेँ ।
तर होस्टलमा पैसा नदिएपछि मलाई होस्टलबाट म्यामले निकालि दिनुभयो । मलाई निकालेपछि पैसा तिरेको सुन्दैछु । सतुङ्गलमा कार्यक्रम हुँदा पनि मलाई र एन्ड्रियालाई नलगि त्यहि घरमा बस्न बाध्य बनाइन्थ्यो । मसँगै बस्ने एन्ड्रियालाई ‘त ड्रक्स खान्छस्, चुरोट खान्छेस्’ जस्ता नानाथरी आरोप लगाई पागल बनाईयो । मलाई भने २०७४ मंसिर १७ गते मध्यबानेश्वरमा रहेको माता पाथिभरा गल्र्स होस्टेलमा राखिदिनु भयो । रक्षा नेपालबाट विभिन्न लान्छना लगाएर महिमा, विशाल, अशोक, दिपेश, शिशिर, क्रिस, शुसिल, एन्ड्रिया र आस्थाको भाईलगायतलाई निकालियो । उनीहरु कहाँ र कुन अवस्थामा छन् ? खोजी गरियोस् । होस्टेल राखेपछि मलाई कहिले पनि रक्षा नेपाल लगिएन । पछि होस्टल सेतोपुलमा सारियो । होस्टेलमा पैसा नतिरेको कारण होस्टेल सञ्चालक रुपाली गुरागाईले मलाई जहिल्यै कोठा सारिरहने गर्नुहुन्थ्यो । मलाई पढाइमा बाधा हुन्थ्थो । तैपनि पढ्छु भन्दै पढ्दै गएँ । म एकदिन विरामी पनि भएँ । रुपाली आन्टीले फोन गर्दा आमाले फोन नै अफ गरेर राखिदिनुभयो, मलाई औषधीउपचार गर्नुको साट्टो । होस्टेलको आन्टीले पनि मलाई तिमी पैसा नतिरेको मान्छे हो, नौ हजार तिर्ने विद्यार्थीलाई राख्नु प¥यो भन्दै मलाई कोठा सार्नु हुन्थ्यो । बिरामी भएको दिन आमाले लिन नआएपछि रुपाली आन्टी अत्तालिएर ‘तिम्रो आमाले कुनै पनि जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भए, म पनि जिम्मा लिन सक्दिन्, आधा घण्टामा मेरो होस्टेल खाली गर भन्नुभयो ।’ भोलिपल्ट आमाले पनि होस्टेल छोड् भन्दै आफन्तकोमा जान भन्नुभयो । म छक्क परेँ । एक्कासी आमाले नै आफन्तकोमा जा भनेपछि म सबै सामान लिएर रक्षा नेपालमै गएँ । म रक्षा नेपाल गएपछि आमाले ‘अब त काँ जाने हो, जा यहाँ तेरो लागि कुनै पनि ठाउँ छैन’ भनेपछि म एक्कासी आत्तिएँ । मलाई अत्यन्तै दुःख महसुश भयो । मलाई रक्षा नेपालमा बस्न नदिएपछि म भाउजुको ठूलोबुबाको कोठामा गएँ । भोलिपल्ट पनि रक्षा नेपाल गएर आमा मेनुका थापासँग कुरा गर्दा पनि ‘त जाँ सुकै जा, यहाँ बस्न पाउँदिनस’् भन्नुभयो । त्यो दिन मलाई सावित्री पुडासैनीकोमा पठाइयो । यसरी मलाई कलेज पढिराखेको मान्छे कहिले कता त ? कहिले कता ? भन्दै पठाउने काम भयो । मेनुका आमाको त्यो ब्यवहारले मलाई अतिनै असैह्य पीडा महसुश भइरहेको छ । सावित्री पुडासैनी मसाजमा काम गर्नुहुन्छ । उहाँको कोठामा पठाउन खोजेपछि म रक्षा नेपालको बाहिरै बसे । मुना दिदीले हिँड् जाँउ भनेपछि आमा लैनचौरकै सीप क्याँफेमा हुनुहुृन्थ्यो । आमा मेनुका थापाले मलाई भेट्ने वित्तिकै मोबाइलले मेरो नाकमा हिर्काउनु भयो । मुना दिदीलाई पनि यो घटना थाहा छ । मेरो नाकबाट रगत आयो, म बेहोस जस्तो भएर आफैँले त्यहि क्याँफेका दाईसँग पानी मागेर खाएँ । सावित्री दिदिले मलाई नाकमा लगाउने मलम र पेन किलर किनेर दिनुभयो । मलाई रातभरी जरो आयो । त्यो नाकको घाउ अहिलेसम्म दुखिरहेको छ ।
२०१२ मा कोरियामा तेक्वान्दो प्रतियोगिता भएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा २५ वटा राष्ट्रले सहभागिता जनाएका थिए । सो खेलमा मेरा मैले भारतीय खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको थियो । मैले भारतलाई पछि पारी गोल्ड मेडल जित्न सफल भएको थिएँ । कोरियाली समाज र नेपाल दूतावासले हामीलाई सम्मान गरेको थियो । त्यहाँ पाएको सबै पैसा र सम्मानपत्र आमाको भतिजी ईश्वरी थापाले कब्जामा लिनुभयो । कोरिया जाँदा पनि रक्षा नेपालको तर्फबाट ७ जना गएका थियौं । साथमा तेक्वान्दो गुरु अशोक खड्का पनि हुनुहुन्थ्यो । रक्षा नेपालको तर्फबाट गएका ६ जनालाई नेपाली कल्चर ड्रेस लगाएर लगिएयो तर मलाई मात्र ड्रेस दिइएन । मलाई झन दुःखले असैह्य भयो । सुरुदेखि नै अरुलाई काखा र मलाई पाखा गरियो । कोरियाबाट फर्किएपछि पनि अरुलाई अगाडि ल्याइयो तर मलाई भने वास्तै गरिएन । म तिरस्कारमा परे । किन परे मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन । तेक्वान्दो प्रशिक्षणका बेला मलाई अन्य काममा लगाइन्थ्यो । जुन दिनदेखि मैले जितेको गोल्ड मेडल आमाको हातमा प¥यो, त्यस दिनदेखि मैले त्यो जितेको गोल्ड मेडल र सर्टिफिकेट हेर्नसम्म पाएको छैन् । त्यो गोल्ड मेडल र सर्टिफिकेट दराजमा ताल्चा मारेर राख्नुभएको छ । आजसम्म रक्षा नेपालको प्रायजसो कार्यक्रममा मलाई सहभागी गराइन्न ।
होस्टलमा राख्दा विना सम्झौता मातापाथीभरा गल्र्स होस्टेलमा राखिदिनु भयो । होस्टेलमा पनि मलाई सम्पूर्ण सुविधाबाट बञ्चित गराइयो । ०७४ साल मंसिर १७ गतेबाट होस्टेलमा बसेता पनि हालसम्म होस्टेलको शुल्क नतिरेकै कारण मलाई होस्टेलबाट निकालियो । त्यो कुरा प्रहरी, प्रशासनले केरकार गरेको खण्डमा यर्थाथ खुल्ने छ । होस्टेलको आन्टीले पनि पैसा नतिरेको भन्दै शुरु–शुरुमा टचर दिनुभयो । तर मैले मेरो बास्तकिता बताएपछि राम्रै व्यवहार गर्नुभयो । पैसा नतिरेको कारण मलाई निकाल्दा समेत मेरी आमाले मलाई लिन आउनु भएन । मलाई तिरस्कार गरियो । म अहिले सडकमै छु भन्दा फरक पर्दैन । अहिले म मेरो साथीको दाईभाउजुको परिवारका केही दिनका लागि आश्रय लिएर बसेको छु । मिडियामा कुरा पुगेपछि उहाँलाई समेत फसाउन मलाई लगेको भन्दै उजुरी गरेको सुनेको छु । तर, त्यो सबै गलत हो । उहाँको बहिनी पनि एउटा भिक्टिम हो । पहिला आश्रय लिएर सोही ठाउँमा बसेकी थिइन् । तर विभिन्न टचर दिएपछि उनको दाईले त्यहाँबाट फिर्ता लग्नुभयो ।
पीडितको नाममा सहयोगी दाताहरुले आफ्नो गाँस काटेर दिइएको रकमबाट आफ्नो व्यक्तिगत धनसम्पत्ति जोड्नु भएको छ भन्ने मैले आरोप लगाएको जस्तो देखिन्छ । तपाईहरुले नै छानविन गरेको खण्डमा त्यो पनि सत्य पाउनु हुनेछ । आमाले धापाखेलमा घर किन्नु भएको छ । विदेशीले सहयोगले सतुंङगलमा जग्गा जमिनसहित आफ्न्ै विशाल भवन छ । जुन ब्यक्तिगत नाममा भएको सुनेको छु । यदि त्यसो हो भने उक्त सम्पत्ति संस्थाको नाममा ल्याइयोस् । त्यसमा सबैको साथ होस् भन्न चाहन्छु । पीडितको नाममा आएको रकम हिनामिना गरि अकुत सम्पति जोडेकाले रक्षा नेपालकी सञ्चालक एवम् अध्यक्ष मेनुका थापालगायतलाई यथासिघ्र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन म ब्यक्तिगत रुपमै नेपाल सरकारसमक्ष अपिल गर्छु ।
संस्थाको आश्रय लिई बसेका भाईबहिनीहरुलाई कुनै पनि अधिकारबाट वञ्चित नगराइयोस् । संस्थाबाट निकालिएका र निस्कन बाध्य पारिएका हालसम्मका सबै भाईबहिनीहरुलाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले यथासिघ्र खोजतलास गरी उनीहरुले पाउने सहयोग ब्यवस्था र अधिकार प्राप्त गराइयोस् । म कानुन पढेर अन्यायमा परेका सम्पूर्ण म जस्तै पीडामा परेका दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुको पक्षमा वकालत गरी न्याय दिलाउन अग्रसर हुने प्रण गर्छु । पीडितलाई न्याय र अपराधीलाई दण्ड सजाय दिइयोस् । कानुन विषय पढेर उच्च आहोदामा पुग्ने मेरो सपना छ । मलाई असल ब्यक्ति बन्नु छ । सबैको साथ र सहयोग चाहिएको छ । अहिले म दुवैतर्फबाट असुरक्षित छु । मैले आमाकै विरुद्ध आवाज उठाउने प्रयास गरेको छु । जसका कारण म आफ्नै आमा मेनुका थापाबाट असुरक्षित छु । मेरो सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि समेत म सरकारसमक्ष अपिल गर्छु । मेरा शुभचिन्तक जो जसले जहाँजहाँबाट सहयोग गर्नुभयो सवैलाई धन्यवाद । मलाई न्याय नमिलेसम्म तपाईको साथ र सहयोग चाहिन्छ । मेरो पीडालाई सँधैका लागि शान्त पार्ने, श्वास फेर्न र मलाई स्वतन्त्रताको साथ डरत्रास विना नै हिडडुल गर्ने बाताबरण बनाउन म अपिल गर्छु ।